ကောင်းကင်ကို: God ခဏဖြစ်သွားခိုက်(သရော်စာ)
Posted by Kaung Kin Ko at 11:33 AM
အရမ်းကို စာရေးကောင်းပါတယ်.. post တော်တော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်.. ဆက်ပြီးအားပေးနေပါ့မယ်...
So sad. I really fell bad. Because of our stupid govt....
ကျွန်ုပ်လည်း ကျပ်ပြေးမျှစ်ချဉ် ကို မြည်းရင်း... မင်းဒမြတောင် စီးကရက်ကို တစ်ချက်မျှ ဖွာရှိုက်လိုက်လေသည်။ ဟိုးတရက်က
ကင်ဂျုံအီး လက်ဆောင်ပေးထားသော မှို တစ်ဖတ်နှိုက်လိုက်... အီရန်မှ သံပုရာနှင့်နှပ်ထားသော ဆိတ်သားကင်ကို ကိုက်လိုက်... ၀မ်ကျားပေါင် လက်ဆောင်ပေးထားသော ကြွေခရားထဲတွင်... ရုရှမှ ဗော်ဒကာ အရက်ကိုထည့်ကာ တမျှဉ်းမျှဉ်းသောက်ရမည့်အစား... မော့နေကျ အာမီရမ်မော့သလိုအငမ်းမရ မော့လိုက်လေ သည်။
အမှောင်ကြီးထဲရောက်သွားသလို... မိုက်ကနဲဖြစ်သွားရင်း... အို..ဘုန်းကြီးတွေ...ဘုန်းကြီးတွေ... သွေးတွေနဲ့..ကျုပ်သတ်တာမဟုတ်ဘူး... ကျုပ်မသတ်ဘူး... ကျုပ်မသတ်ဘူး........ ကျုပ်ကိုလာခေါ်နေကြပြီ... မလာကြပါနဲ့.. မလာကြပါနဲ့... စိုးဝင်း စိုးဝင်း.. ကျုပ်ကို လာခေါ်နေပြီ... ဗလုံးဗထွေးရေရွတ်လိုက် လေသည်။ ရင်တခုလုံး ဖားဖိုထိုးသကဲသို့ မောဟိုက်လှ၏။ ရေကဆာလှသည်။ ဇီးကင်းခန့် ချွေးစေးများလည်း ပြန်နေသည်။ (တပ်ချုပ်ကြီး..တပ်ချုပ်ကြီး.. ကိုယ်ရံတော်လေး သန့်ရှင်း) အော်.. ကျုပ် သေခါနီးလို့ ငရဲ နိမိတ်တွေထင်နေတာပါလား။ (သန်းရွှေ ဘက်မှ ခံစားတင်ပြသည်။)
ပုံ... ငှဲလျောင်း ငှဲလျောင်း (ဝေသာလီ ပုံနား)
်အရမ်းကောင်းတာပဲ ကိုကောင်းကင်ကိုရေ ရေးထားတာ။ သရော်စာဆိုတဲ့အတိုင်းဖတ်ရင်း စိတ်လည်းတို၊ ရယ်လည်းရယ်ပြီးတော့ဖတ်နေတာ။ နောက်ဆုံးကျတော့ပါးစပ်ပိတ်သွားရတယ်။ရသမြောက်
hehe funny god,
I like this post according to your real experience. :P
This is Myanmar heehe
တွေးကြည့်လိုက်တော့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ မလှမပနဲ့ ညီနေတဲ့ သုံးနားညီတြိဂံတစ်ခုပဲ။ ဘယ် “အနား” က စပြင်သင့်သလဲတော့ မသိ ဘူး။
ကျမ သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျို့ ။ မြန်မာပြည်မှာ မ GOD နိုင်သူအပေါင်း မြန်မြန် GOD နိုင်ပါစေသောဝ်။
ကမ္ဘာကလဲ နာရီဝက်လောက်ပဲ ပြားနိုင်တော့ တယ်။“စင်္ကာပူကအကောင်တွေ၊ မင်းတို့ဘာသာ မင်းတို့ ဆက်ပြားကြတော့၊ ငါကတော့ ပြန် လုံးပြီ” လို့ စိတ်ထဲကနေ ပြောလိုက်တယ်။
Whatanice post. Good job.
GOD ကနေ DOG ဖြစ်သွားသလားဗျ။
Nice post. So you have read "The World is Flat"?:)
ကောင်းကင်ကို ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ...
ရန်ကုန်မြို့ ထဲပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ.. လစာထုတ်တဲ့တရက်ကလေး GOD ဖြစ်ဖို့ အရေး အရောင်းစာရေးတွေနဲ့ ခနခန ရန်ဖြစ်နေကြရတဲ့ သူတွေ ထဲကတယောက်ပါ
ရန်ကုန်က မွန်းကျပ်နေတဲ့ ဘဝတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်သွားစေပါတယ်။ သရော်စာဆိုပေမဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သရော်စာကောင်းတပုဒ်ပါ။
ဒီသရော်စာဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပါ။ ကြိုက်လွန်းလို့ ခဏခဏဝင်ဖတ်ပါတယ် :)
ခံစာချက်တွေ ကောင်းပါတယ်။ မြန်မာမှာ လူအတော်များများက God ကို God မှန်းမသိကြသေးတာကတော့ ဆိုးတယ်။........ဆက်လက်အားပေးမှာပါ။...
Hats off to you. great post.
အစ်ကို ကောင်း ဒီပို့စ်လေးကို http://kyawkyawthet.blogspot.com မှာ ပြန်တင်ပါရစေဗျာ။ ကြိုက်လွန်းလို့ ၊ မဖတ်ရသေးတဲ့ ဘော်ဘော်တွေရှိရင်လဲ ဖတ်မိအောင်လို့ပါ
အင်း ရတယ်ညီ။ ကျေးဇူးး-)
ကောင်းကင်ကို: ကိုယ့်ထက်ငယ်လား ကြီးလားတော့ မသိဘူး..... ဦးအောင်တော့ တွယ်လိုက်ဦးမယ် :P ..... ညီလေးကောင်းကင်ကိုရေ.... ရေးလက်စနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက ပြန်လာတဲ့ God တွေရဲ့ မွေးရပ်မြေသို့ ခရီးတစ်ခေါက်မှာ ဘယ်လောက်များ God ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အရသာရခဲ့သလဲဆိုတာလေးပါဆက်ရေးပေးပါဦးလို့ အစ်ကို Request လုပ်ပါတယ်.... :
ဟုတ်ကဲ့ အကို ဖိုးချို၊ ရေးလိုက်ပါမယ်ဗျး-)